Xiddig hore kooxda Manchester United ah oo ku dhiiragaliyay Sergio Ramos inuu u dhaqaaqo Red Devils – Gool FM
(Manchester) 27 Nof 2020. Qandaraaska Sergio Ramos ee kooxdiisa Real Madrid wuxuu dhacayaa dhamaadka xilli ciyaareedkan, halka labada dhinac aysan weli gaarin heshiis ku saabsan in qandaraaska loo cusbooneysiiyo, xilli wararka qaar ay tilmaamayaan suurtagalnimada uu uga tagayo Los Blancos.
Xiddigii hore kooxda Manchester United ee Dimitar Berbatov ayaa saadaaliyay inuu guuleysan doono kabtanka Real Madrid ee Sergio Ramos, haddii uu u dhaqaaqo Horyaalka Ingiriiska, gaar ahaan Red Devils.
Dimitar Berbatov ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Waxaa jira warar badan oo la isla dhexmarayo oo ku saabsan mustaqbalka Sergio Ramos, sida ay sheegayaan wararka, ciyaaryahanka iyo kooxda labaduba wax heshiis ah ma gaarin, xilli Ramos uu gaaray 34 sano, waxay u badan tahay in labada dhinac ay ku doodayaan kordhinta qandaraaska hal xilli ciyaareed iyo labo xilli ciyaareed.”
“Thiago Silva, oo isaga ka weyn isla markaana jira 36 sano, ayaa cadeeyay inaysan jirin waqti uu kaga daaho u dhaqaaqista horyaalka Premier League, ilaa iyo haatana wax walba si fiican ayeey ugu socdaan ciyaaryahanka reer Brazil.”
“Waana hubaa taas haddii Ramos uu doonayo inuu u dhaqaaqo koox sida Manchester United oo kale ah xaallada sifiican ayeey ugu socon doontaa sidoo kale, wuxuu ku jiraa qaab dhismeed aad u wanaagsan walina waa daafac heer caalami ah, sida ay ila tahay wuxuu weli heystaa waxyaabo badan uu ku soo bandhigi karo kubadda cagta ah.”
Chelsea oo dooneysa inay la soo saxiixato daafac dhexe muhiim ah ee ka ciyaara Horyaalka Spain